Football Khabar » म्याराडोनाको ‘सर्वोत्कृष्ट खेलाडी’को सूचीबाट मेस्सी आउट !
म्याराडोनाको ‘सर्वोत्कृष्ट खेलाडी’को सूचीबाट मेस्सी आउट !
अर्जेन्टिनाका लिजेन्ड खेलाडी डिएगो म्याराडोनाले आफ्नो नजरका इतिहासकै सर्वकालीन महान् खेलाडी छानेका छन् । उनले ६ पटक बालोन डि‘ओर अवार्ड जितेका आफ्नै देशका लिओनल मेस्सीलाई छाडेर अर्जेन्टिना तथा स्पेनिस रियल मड्रिडका लिजेन्ड खेलाडी अल्फ्रेडो डि स्टेफानोलाई इतिहासकै सबैभन्दा महान् खेलाडी भनेका छन् ।
म्याराडोनाले ब्राजिलका लिजेन्ड पेले र आफ्नो देशका मेस्सीको तुलनामा स्टेफानो धेरै महान् खेलाडी रहेको बताए । म्याराडोनाले मेस्सीसँगै पेले वा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि स्टेफानोको स्तरमा नरहेको बताएका छन् ।
अर्जेन्टिनी मिडिया ‘टिवाईसी स्पोर्ट्स’सँग कुरा गर्दै म्याराडोनाले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा डि स्टेफानो इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन् । सबैभन्दा माथि छन् । मभन्दा पनि धेरै माथि ।’
म्याराडोनाले पेलेलाई फुटबलको जीवित इतिहासका रूपमा लिन सकिने भए पनि स्टेफानोको प्रतिभा पेलेको भन्दा उच्च स्तरको रहेको बताए । ‘पेले स्टेफानोको प्रतिभा मान्न तयार थिएनन् । पेलेका साथीहरू उनलाई फुटबलको इतिहास नै मान्थे । इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो भएकाले नै मैले पेलेलाई रियोमा हराएँ,’ म्याराडोनाले भनेका छन् ।
म्याराडोनाले मेस्सीसँग आफ्नो सम्बन्ध साथीको जस्तो रहेको पनि बताए । ‘मेस्सीले राम्रो गरिरहेका छन् । मेस्सी राष्ट्रिय टोलीमा आउँछन् र फुटबल खेल्छन् । तर, कहिल्यै पनि राष्ट्रिय गान गाउँदैनन् । उनका साथीहरू भन्ने गर्छन्– मेस्सी क्याटलान हो । तर, यसबारे मैले उनको आलोचना गरेको छैन ।’
प्रकाशित मिति ४ पुष २०७६, शुक्रबार १०:४८